Fibre / Plasma Metal Cutting Machine Factory - China Fibre / Plasma Metal Cutting Machine Manufacturers, mpamatsy
China CNC Manufacture CNC Pipe Cutter 5 Axis 3D CNC Plasma Cutting Machine ho an'ny metaly
APEX Brand 5 axis sodina milina fanapahana plasmaampiasaina indrindra hanapahana fantsona boribory, fantsona efamira ary fantsona mahitsizoro.
Afaka manapaka sary sarotra isan-karazany toy ny fanokafana sodina, grooves, ary bevels zoro kely.
Ny halavan'ny fanapahana dia 6 metatra, 9 metatra ary 12 metatra.Tohano ny fanamboarana
5 × 10 Hypertherm Plasma Cutter ho an'ny takelaka metaly sy fantsona metaly
1.plasma fanapahana milina ampiasaina Welded lathe fandriana amin'ny matevina profiled vy, mafy kokoa sy miorina tsara.
2. Tohano ny rindrankajy fanatobiana FASTCAM toy ny fisie mahazatra G code navoakan'ny rakitra azo vakiana amin'ny rindrankajy fiovam-po toy ny endrika DXF,DWG novokarin'ny AUTOCAD.U disk fifanakalozana rafitra fanaraha-maso ny fichier, mora ny miasa.
Varotra mafana 2021 Best 1530 CNC Plasma cutting machine
Varotra mafana Large Gantry Industrial Plasma Cutting Machine
1) Ny taratra dia mampiasa endrika ara-drafitra maivana, miaraka amin'ny firafitry ny henjana tsara, ny lanja maivana ary ny tsy fahampian-tsakafo kely.
2) Ny rafitra gantry, Y axis dia mampiasa rafitra roa-motera roa, X, Y, Z axis rehetra dia mampiasa roa-mahitsy izay mahatonga ny milina mitondra fiara tsara amin'ny avo lenta.
Mamaha tanteraka ny fomba fanodinana manual mahazatra.Manatsara ny fahombiazan'ny imbetsaka.
1530 Fibre Laser Generator CNC Metal Pipe/Tube Laser Cutting Machine
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina nandray izao tontolo izao malaza IPG fibre tamin'ny laser loharano sy Raycus tamin'ny laser loharano, Raytools fanapahana lohany sy mavitrika rafitra mifantoka, dia afaka manapaka sy totohondry karazana fitaovana metaly amin'ny mazava tsara sy ny hafainganam-pandeha avo.Koa satria tamin'ny laser dia nampitaina tamin'ny fibre, dia tsy ilaina ny fikojakojana na hanitsy ny tamin'ny laser Optical lalana, dia mampihena be ny milina ny taham-pahadisoana sy maharitra ny fiainana miasa.Ny faritra fanapahana endrika lehibe dia mahafeno ny fangatahan'ny karazana fanodinana metaly isan-karazany.
Amidy amin'ny vidiny mora High Power Fibre Laser Metal Cutting Machine
Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny takelaka metaly, fantsona ary fantsona
1530 Fibre Laser Metal Pipe Cutting Machine amidy
2021 milina fanapahana laser fibre tsara indrindra ho an'ny metaly
1530 Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny Fabrication Sheet Metal
Hot fivarotana Jinan Factory mivantana Fibre Laser Metal Cutting Machine
Milina manapaka laser fibre mora vidy ho an'ny fantsona metaly sy fantsona metaly